Anidaso Wɔ Hɔ Ma Awufo? | Bible Nsɛmmisa Ho Mmuae
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Mongolian Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Anidaso wɔ hɔ ma awufo?
Owu te sɛ nna, efisɛ obi wu a ɔrentumi nhu nea ɛrekɔ so, na ɔrentumi nyɛ hwee. Nanso Nkwamafo no betumi anyan no afi awufo mu asan aba nkwa mu bio. Onyankopɔn maa Yesu tumi ma ɔde nyanee awufo pii; Onyankopɔn yɛɛ saa de kyerɛe sɛ ampa obetumi anyan awufo.—Kenkan Ɔsɛnkafo 9:5; Yohane 11:11, 43, 44.
Ɔkwan bɛn so na owu te sɛ nna?
Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ awufo a wɔn ho asɛm wɔ n’adwenem no, obenyan wɔn aba wiase foforo a trenee te mu no mu. Saa bere yi de, wɔretwɛn kosi sɛ Onyankopɔn benyan wɔn. Ade nyinaa so Tumfoɔ no ani gye ho paa sɛ ɔde ne tumi bɛyɛ adwuma asan de awufo aba nkwa mu bio.—Kenkan Hiob 14:14, 15.
Sɛn na owusɔre no bɛyɛ?
Awufo a Onyankopɔn benyan wɔn no, obiara hu obi a onim no a, obehu no; obiara behu ne nnamfo ne n’abusuafo. Ɛwom, sɛ obi wu a, ne honam porɔw, nanso Onyankopɔn betumi anyan onii no ama no nipadua foforo.—Kenkan 1 Korintofo 15:35, 38.
Nnipa kakraa bi na wobenyan wɔn ama wɔakɔtena soro. (Adiyisɛm 20:6) Awufo a wobenyan wɔn no, emu pii bɛtena asase so paradise. Wɔbɛma wɔn afi ɔbra ase bio, na wobenya anidaso sɛ wɔbɛtena ase daa.—Kenkan Dwom 37:29; Asomafo Nnwuma 24:15.